MPIANDRY FONJA NIVAROTRA HEROINE : Hiakatra Fitsarana amin’ny 25 novambra ho avy izao
Mizotra ara-dalàna ary ahitam-bokany hatrany ny ady amin’ny zava-mahadomelina eto an-drenivohitra. 25 octobre 2019
Manao antso avo eny anivon’ny fiarahamonina ihany koa ny mpitandro filaminana mba hanome azy ireo loharanom-baovao raha sendra ka mahita tranga mampiahiahy. Hamafisina hatrany mantsy fa ny fiparitahana zava-mahadomelina no anisany antony mampahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana any amin’ny Fariatra maro eto Madagasikara. Tatitra avy amin’olona tsara sitrapo izao no nahafantarana ilay lehilahy nivarotra “Heroine “ teny Anosy.
Voalaza rahateo koa fa mpiandry fonja eny Tsiafahy ity tovolahy tratra ity, saingy izy indray no naiditra am-ponja noho ny famarotana zava-mahadomelina. Raha ny tohin’ny fanadihadiana voaray omaly avy eo anivon’ny Polisim-pirenena dia naiditra am-ponja vonjimaika ity farany amin’izao fotoana izao ary amin’ny 25 novambra ho avy izao kosa ny fitsarana azy. Raha tsiahivina moa ny zava-nitranga dia ny alatsinainy 21 oktobra 2019 lasa teo tokony ho tamin’ny 12ora sy 30mn tetsy Anosy no voasambotry ny Polisy misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina ilay lehilahy. Raha vao naheno io vaovao io ny Polisy dia nanao ny fanadihadiana ka natao ny vela-pandrika hisamborana azy. Nomena fotoana teo Anosy izy io ary vao tonga teo amin’ilay fotoana nifanomezana dia tonga dia noraisim-potsiny.
“Heroine” milanja 349 grama no hita tany aminy nandritra ny fisavana. Niaiky ny heloka vitany izy ary nilaza fa roa alina sy iray hetsy ariary ny fivarotany ny 1 grama.